Harry Potter Fans တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Hogwart's Mystery Game
Harry Potter Fans တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် Hogwart’s Mystery Game
26 Apr 2018 . 4:39 PM
Harry Potter Fans တွေအတွက် Hogwart’s Mystery Game အသစ်တရားဝင်ထွက်လာပါပြီ
စာအုပ်တွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့ ငယ်ငယ်က ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ Hogwarts ကျောင်းတော်ကြီးထဲကို သင်ဟာ မှော်ကျောင်းသားလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ရောက်ရှိသွားမယ်လို့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါလား…မှော်စာအုပ်တွေလေ့လာမယ်၊ Spell တွေသင်ယူမယ်၊ မှော်ပညာတွေအတူလေလ့လာပြီးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မှန်ကြောင် ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့မယ်၊ ကျောင်းက အခန်းတွေထဲကိုဝင်ပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလေ့လာမယ်…. ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင် ဒီ့ထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မယ့် Harry Potter Hogwart’s Mystery Game ဟာ Google Play Store နဲ့ Apple Store တို့မှာ မှာတရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ (သက်ဆိုင်ရာ App Store တွေမှာ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်)
ကောင်းမွန်တဲ့ Graphic နဲ့ Animation အထူးပြုလုပ်ချက်တွေကြောင့် Player အနေနဲ့ Hogwarts ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေသယောင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကို အမှန်အကန်အထောက်အကူပြုစေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ Harry Potter Fans တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ခန်းနားလှပတဲ့ Hogwarts ကျောင်းတော်ကြီးကိုလည်း လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဂိမ်းကို မဖြစ်မနေဆော့ကြည့်သင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Game အတွက် Download ပြုလုပ်ရမယ့် File Size ကတော့ 90MB ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းသွားအခန်းဆက်တွေ တစ်ခုပြီးလို့နောက်တစ်ခန်းကိုကူးမယ့်အချိန်မှာတော့ Additional File တွေ ထပ်ပြီး Download လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆော့နေကြတဲ့ Player အချို့ကတော့ ၁နာရီလောက်ဆော့ရင် Data 500MB လောက်ကုန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဂိမ်းကိုဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ WiFi Network နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဆော့တာ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Mobile Data နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်လည်း Data Plan တွေဝယ်ပြီးမှဆော့ရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
Harry Potter Fans တှအေတှကျ Hogwart’s Mystery Game အသဈတရားဝငျထှကျလာပါပွီ
စာအုပျတှေ ရုပျရှငျတှထေဲမှာပါတဲ့ ငယျငယျက ရငျးနှီးခဲ့တဲ့ Hogwart ကြောငျးတျောကွီးထဲကို သငျဟာ မှျောကြောငျးသားလေးတဈဦးအနနေဲ့ရောကျရှိသှားမယျလို့စိတျကူးယဉျကွညျ့ပါလား…မှျောစာအုပျတှလေလေ့ာမယျ၊ Spell တှသေငျယူမယျ၊ မှျောပညာတှအေတူလလေ့လာပွီးအခကျအခဲတှရေငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့အတှကျ မှနျကွောငျ ကြောငျးသားလေးတဈယောကျနဲ့ မိတျဖှဲ့မယျ၊ ကြောငျးက အခနျးတှထေဲကိုဝငျပွီး လြှို့ဝှကျခကျြတှကေိုလလေ့ာမယျ…. ဒီလိုလုပျဆောငျခကျြတှအေပွငျ ဒီ့ထကျပိုပွီး စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးတှနေဲ့ ဆော့ကစားနိုငျမယျ့ Harry Potter Hogwart’s Mystery Game ဟာ Google Play Store နဲ့ Apple Store တို့မှာ မှာတရားဝငျထှကျရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ (သကျဆိုငျရာ App Store တှမှော အခမဲ့ Download ရယူနိုငျပါတယျ)
Harry Potter Hogwart’s Mystery release:
ကောငျးမှနျတဲ့ Graphic နဲ့ Animation အထူးပွုလုပျခကျြတှကွေောငျ့ Player အနနေဲ့ Hogwarts ကြောငျးတျောကွီးအတှငျးမှာ ကိုယျတိုငျရောကျရှိနသေယောငျခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။ အန်တရာယျတှကေိုရငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျ့ကို အမှနျအကနျအထောကျအကူပွုစမေယျ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျးရှေးခယျြတတျဖို့လိုပါသေးတယျ။ အကယျ၍သငျဟာ Harry Potter Fans တဈယောကျဖွဈသလို ခနျးနားလှပတဲ့ Hogwarts ကြောငျးတျောကွီးကိုလညျး လလေ့ာခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီဂိမျးကို မဖွဈမနဆေော့ကွညျ့သငျ့တယျလို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Game အတှကျ Download ပွုလုပျရမယျ့ File Size ကတော့ 90MB ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျလမျးသှားအခနျးဆကျတှေ တဈခုပွီးလို့နောကျတဈခနျးကိုကူးမယျ့အခြိနျမှာတော့ Additional File တှေ ထပျပွီး Download လုပျဖို့လိုအပျပါမယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာဆော့နကွေတဲ့ Player အခြို့ကတော့ ၁နာရီလောကျဆော့ရငျ Data 500MB လောကျကုနျသှားတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီဂိမျးကိုဆော့မယျဆိုရငျတော့ WiFi Network နဲ့ခြိတျဆကျပွီးမှဆော့တာ အဆငျအပွဆေုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Mobile Data နဲ့ဆော့မယျဆိုရငျလညျး Data Plan တှဝေယျပွီးမှဆော့ရငျ ပိုပွီးအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။